Sina My People, My Country copyright and Investment | Galaxy Galaxy
Daty famoahana: 2019-9-30
Ireo talenta fito dia mifototra amin'ny fotoana malaza tsy hita isa izay niainan'ny tanindrazana hatramin'ny faha-70 taonan'ny nananganana an'i New China. Mitantara tantara iray mampihetsi-po ny fifandraisan'ny olon-tsotra sy ny fireneny. , ny fifandraisana toa lavitra nefa akaiky eo amin'ny vahoaka kely sy ny firenena no manaitra ny fahatsiarovana mahazatra ny olon-tsotra sinoa manerana an'izao tontolo izao.
Kaige Chen / biraon'ny boaty feno 5,68 miliara.
Bo Huang / LEAP (2020), Crazy Alien (2019), The Island (2018) totalin'ny boaty boxe 20,86 miliara
Yi Zhang / Operation Sea Red (2018), Ry malala (2014),Mr.Six (2015) biraon'ny boaty feno 18,88 miliara.
Biraon'ny boaty feno Ge / voangona 10.72 miliara.
Jia Song / biraon'ny boaty feno 6.03 miliara.
Fotoana ara-tantara fito izay mampiavona ny sinoa no mandrafitra ny horonan-tsary maharitra adiny roa sy sasany. Manampy 20 minitra mahery isaky ny toko izany.
Ireo teti-dratsy niparitaka dia mamela mpijery maro hanatevin-daharana ny tantara manontolo. Rehefa dinihina tokoa, nandritra ny fotoana maharitra hatramin'ny 1949 ka hatramin'ny 2016, dia nisy hetsika iray na roa farafahakeliny nitranga tamin'ireo mpijery sarimihetsika. Ho an'ireo ankizy teraka taorian'ny 2016, Ny ray aman-drenin'izy ireo dia tsy maintsy efa niaina ny ankamaroan'ny zava-nitranga tao amin'ny My People, My Country .Koa ny fahatsiarovana fangorahana dia hahatonga ny mpanatrika hahatsapa fihetsiketsehana alohan'ny hahatsapany ny fanaintainana.
Ny iray amin'ireo teboka lehibe indrindra hijerena dia ny isan'ny kintana. Misy kintana 30 ao amin'ny My People, My Cpuntry .ary tsy tafiditra ao anatin'izany ireo kintana vahiny amin'ny sarimihetsika. Azonao antenaina ny fireneko, ny fireneko hanangana onja malaza hafa. fihazana atody.
Avy amin'ny tantara no nisehoan'ny tena olo-malaza. Ny mpandeha an-tany Jing Haipeng, vy maratra Lang Ping dia namolavola ny anjara asany tamin'izany andro izany. Tsy natao ho an'ny fiainana an-davan'andro fotsiny fa ho fahatsiarovana ny taranaka iray, famoronana marina ny sehatra voalohany.
Fomba fizarana Bonus Dividends sinema
Daty namoahana 2019/9/30
Teo aloha: Maty mba ho tafavoaka velona
Manaraka: Ondry tsy misy mpiandry
Sarimihetsika American Thriller
Sarimihetsika sarimihetsika tsara indrindra
Sarimihetsika tsara amin'ny tsena
Sarimihetsika Hindi eo amin'ny tsena
Hollywood Movie On Stock Market